Emecha akpụkpọ anụ zuru oke maka granite ojii maka ala na steepụ
Emecha akpụkpọ anụ zuru oke maka granite ojii maka ala na steepụ
Nkume a bụ granite ojii dị ọcha nke China, na-enweghị ọdịiche ma ọ bụ ntụpọ a na-ahụ anya.Black zuru oke kwesịrị ekwesị maka ngwa ime ụlọ ma n'èzí, enwere ike iji ya mee ihe na kichin kichin, ala ala, steepụ, mgbidi mgbidi, ime ụlọ & sink wdg. zuru oke oji akpụkpọ anụ granite dị mma maka iji mee ihe na oghere ọha.
100% nkume granite eke
Oji dị ọcha
pelu ala kpochapuru, elu honed, elu ire ọkụ, elu ohia-hammered, elu painiapulu, elu ekewara ekewa, elu aja aja, imecha akpụkpọ anụ.,ochie, na ihe ndị ọzọ.
Ime &emputaala mgbidi,Ngwongwo kichin, steepụ, igwe elevator, ụlọ ịsa ahụ,wdg.
Njikwa ọdịiche agba
Nkwadebe nha: ± 1 mm
Iberibe enyochara ya
siri ikeOsisi osisi
7-15 Arụ ọrụ ụbọchị mgbe iwu kwadoro
Nkwado nka na ntanetị
Ike Ngwọta Project
Eserese eserese, imewe ụdị 3D, ihe ngwọta zuru oke maka oru ngo, Mkpokọta Categories Cross
Mbupu oke osimiri, Ụgbọ njem ala, Ụgbọ njem ụgbọ elu
Nkume granite ojii na-achọsi ike n'ahịa ụwa.Enwere ike ịchọta taịlị ojii granite zuru oke maka imecha elu akpụkpọ anụ ebe a.Ha na-ewu ewu na klọb ndị uwe ojii.Ndị ahịa anyị weghaara onyonyo ndị a nke nsonaazụ paịlị ahụ.
Nkwakọ ngwaahịa anyị tụnyere ndị ọzọ
Dị ka ọ na-adịkarị, achọrọ ịkwụ ụgwọ 30% tupu oge eruo, yana nke fọdụrụ maka nnata akwụkwọ.
Kedu ka nkwa & akwụ ụgwọ?
A ga-eme ngbanwe ma ọ bụ nrụzi mgbe ntụpọ nrụpụta ọ bụla achọtara na mmepụta ma ọ bụ nkwakọ ngwaahịa
Nke gara aga: granite ojii nwere akpụkpọ anụ versace matrix Brazil maka ala mgbidi ime
Osote: Ọnụ ahịa n'ogbe negro angola granite ojii maka mgbidi mpụta
Ihu mgbawa nke China ojii G684 maka ụlọ ...
Ihe nrịbama granite na-acha anụnụ anụnụ, Taịlị mgbidi Marble ọcha, Gray Granite, Black Granite, Gray Gray dị ọkụ, Granite odo odo,